बादलकाे प्रश्न : म लालगद्दार भए पार्टी फुटाउनेहरु के गद्दार हाे ? — Jana Garjan
बादलकाे प्रश्न : म लालगद्दार भए पार्टी फुटाउनेहरु के गद्दार हाे ?
काठमाडौं । नेकपा केपी ओली समूहका नेता रामबहादुर थापा बादलले आफूलाई ‘लालगद्दार’ भन्नेहरुलाई प्रश्न गरेका छन् । शनिबार चितवनमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै थापाले भने, ‘केही साथीहरू मलाई लालगद्दार भन्नुभयाे । म लालगद्दार भए उहाँहरू के गद्दार हाे ? पार्टी फुटाउने उहाँहरु हाे ।’
केहीअघि चितवनमा ‘बादल लालगद्दार’ भन्दै कालाे बेलुन उडाइएकाे थियाे । बादलले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले पार्टीमा फुट पैदा गरेको आराेप पनि लगाए । तपाईंहरूले जसरी पार्टीमा फुट पैदा गर्ने दुस्साहस गर्नुभएको छ, त्यसबाट पछाडि फर्किनुस्’, गृहमन्त्री समेत रहेका थापाले भने, ‘आफ्ना गल्ती स्वीकार्नुस्, आउनुस् पार्टीमा फर्किनुस्। जनता एकता चाहान्छन्।